1. Ekwenyere na ọtụtụ ndị nwere ike ịnwe akụkọ ochie Instagram nke ha anaghị eji. Mana ọ naghị emechi ma hapụ akaụntụ gị naanị, yabụ ozi gị na foto gị ga-adị n'ịntanetị. Ya mere, iji gbochie ndị ọzọ ịnweta ozi na foto. Taa, anyị ga - ewebata usoro etu esi ehichapụ akaụntụ Instagram. Site ihichapụ akaụntụ Instagram, enwere ike ime ya na ụzọ 2: mechie akaụntụ Instagram nwa oge ma hichapụ ya kpamkpam. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịma ihe ikwesiri ime, ka anyị lee anya.
2. Etu esi ewepu akaụntụ Instagram nwa oge
3. Maka nkwụsịtụ nwa oge nke akaụntụ Instagram, ọ ga-eme onye nwe akaụntụ ahụ, ndị na-eso ụzọ ya na ọha mmadụ. Enweghị ike ịhụ akaụntụ ma ọ bụ rụọ ọrụ na akaụntụ mechiri emechi. Agbanyeghị, uru nke ụdị mmechi akaụntụ a bụ na ị nwere ike ịmaliteghachi ọrụ ma emechaa. Nzọụkwụ iji kwụsị akaụntụ Instagram nwa oge ka ndị a: Nke mbụ, ị ga-aga https://www.instagram.com/ Site deactivating akaụntụ Instagram gị, ị ga-abanye site na ihe nchọgharị weebụ naanị. Enweghi ike imechi site na ngwa Instagram
4. Mgbe ịbanye n'ime usoro Pịa ka itinye peeji nke profaịlụ gị.
5. Wee pịa na edit profaịlụ bọtịnụ.
6. Mgbe e mesịrị mgbe ị na-abanye na peeji nke dezie profaịlụ Nwere ike pịa bọtịnụ. "Mechie akaụntụ m ruo nwa oge"
7. A ga-akpali gị ịhọrọ ihe kpatara ịgbachi akaụntụ gị nwa oge wee banye paswọọdụ akaụntụ Instagram gị Ozugbo ị mechara ihe niile, pịa bọtịnụ ahụ. “Nwa oge deactivating njirimara akaụntụ” na-eme.
8. Otu esi ehichapụ akaụntụ Instagram na-adịgide adịgide
9. Nhichapụ na-adịgide adịgide nke akaụntụ Instagram gị bụ ihichapụ akaụntụ gị na data gị niile. Enweghị ike ịgbake ọzọ Nzọụkwụ iji hichapụ akaụntụ Instagram kpamkpam bụ ndị a - Nzọụkwụ mbụ ị ga-aga >> https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/ site na ịbanye na akaụntụ Instagram site na ihe nchọgharị weebụ naanị - Wee pịa bọtịnụ ahụ. "Hichapụ .. (aha akaụntụ gị) .." emeela. Agbanyeghị, ozugbo ịpịrị bọtịnụ nhichapụ, akaụntụ gị agaghị ehichapụ ozugbo. Ma ga-ezo A ga-ehichapụ ya na ụbọchị na oge akọwapụtara Ọ bụrụ na ọ bụghị ruo ụbọchị, akaụntụ gị ga-ehichapụ. Nwere ike ịlaghachi ma kagbuo nhichapụ akaụntụ. Mana ọ bụrụ na ụbọchị na oge akọwapụtara agafeela, akaụntụ gị ga-ehichapụ kpamkpam na enweghị ike ịgbake.